Arimaha Bulshada – Page 6 – Filimside.net
Kusoo dhawaada barnaamijkeena cusbaa qeybtiisa 2aad kaasoo taxane inoo noqon doono maalinkasta anagoo idiinkugu soo gudbin doono waxyaabaha ama xaqiiqooyinka layaabka leh ee aduunkaan ka jiraan kuwaas oo aad u baahantahay inaad wax badan […]
Jawaabihii ugu waaweynaa ee dadka qaar lasiiyay kuwaasoo dadkii maqleen gabi ahaanba ka yaabiyeen qeybtii 5aad.
Inta badan waxaan la kulanaa nolol maalmeedkeena su’aalo badan kuwaasoo qaarkood yihiin su’aalo doqonimo ah qaarkalana ay yihiin wax lala yaabo. Su’aalahaas oo badanaa ah kuwa aan laga fiirsan ayaa qofka la weydiiyo badanaa […]
WAA KUMA DR. ZAKIR NAIK: Maqaal Xiiso Badan
Waxaa Qoray: Abdirashid Mohamud Nor Zakir Naik. Dr: Zakir Abdulkariim Naik Wuxuu ku dhashay Magaalada Mumbai, Gobolka Maharashtra ee Wadanka India – Taariikhdu markey aheyd 18th Oct 1965. Waa daaci diinta Alle “SWC” ku baaqa […]
Nin u dhashay dalka Pakistan oo saddex dumar ah guursaday, kana dhalay lix iyo soddon carruur ah, ayaa warbaahinta u sheegay in aanu wali gaadhin hadafkiisi oo uu ku taamayo sidii uu u guursan lahaa […]
Layaabka Adduunka: Nin Aan Kabo Xidhan
Nin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo, Ben Donnelly, da’diisuna tahay 33-jir ayaa muddo afar sano ah, iska daayay, xidhashada kabaha, waxaanu isagoo cagaagan kabo la’aan ku dhex lugeeya caasimadda dalka Ingiriiska. Ninkan […]
Xaalad mucjiso ay ku tilmaameen dhakhaatiirtu ayaa ka dhacday cusbitaal ku yaala dalka Argentina, ka dib markii hooyo sadex bilood miyir la’aan ahayd (Coma), ay dhimasho ka badbaaday, ka dib markii ay umushay ilma yar […]
Xaqiiqooyin layaab leh oo aadan horay u maqlin.(barnaamij cusub).
Kusoo dhawaada barnaamij cusub oo taxane inoo noqon doono kaasoo aan maalinkasta idiinkugu soo gudbin doono waxyaabaha ama xaqiiqooyinka layaabka leh ee aduunkaan ka jiraan kuwaas oo aad u baahantahay inaad wax badan ka ogaatid. […]
GABAR SALAAN LOGA CEYRIYAY JAAMACAD.
Waxaa Qoray: Abdirashid Mohamud Nor Sida lagu daabacay idaacadda adduunka la hadasha ee BBC-da, maamulka jaamacadda Al Azhar ayaa go’aan ku gaaray iney ka eryaan waxbarashada gabar xabadka ku salaantay wiil guur usoo bandhigay sida […]
Haweeneey koomo ku jirtay 14-sano oo cunug isbitaal ku dhashay iyo booliska oo kiiskan yaabka badan baarayaan.
Haweeneey koomo ku jirtay mudo 14-sano ah ayaa cunug ku dhashay isbitaal ku yaalo Hacienda HealthCare magaalada Phoenix ee dalka Mareekanka xili ay iyada bukaan ahayd. Booliska Arizona ayaa haatan kiiskan yaabka badan baarayaan madaama haweeneyda […]